Ogaden News Agency (ONA) – Ururka dhalinyarada OYSU Yemen/Sanca oo shir isugu yimid uu khadka teleefoonka kaga qaybgalay Xoghaya guud.
Ururka dhalinyarada OYSU Yemen/Sanca oo shir isugu yimid uu khadka teleefoonka kaga qaybgalay Xoghaya guud.
Posted by ONA Admin	/ December 7, 2012
Waxaa shir ku qabtay dalka Yemen ururka dhalinyarada iyo ardayda OYSU faraca Yemen uu kala soo qayb galay khadka telephonka markii ugu horaysay xoghayaha guud ee ururka halgame Mujaahid Sh. Ibraahim. Shirka ayaa l’isku weydaarsaday war bixino dhinacyo badan tabanaya waxaana kamid ah sidii kor loogu qadi lahaa guud ahaan wax qabadka bushada S.Ogadenia ee ku nool dalka Yemen gaar ahaan waxqabadka ururka dhalinayarada OYSU fariciiso dalka Yemen.
Shirka ayaa wuxuu ku baraarujiyay dadwaynihii ka soo qaybgalay shirka in ay sii laba jibaaraan tageerada ay u hayaan halganka gobanimadoon ee shacabka S.Ogadenia ay ku radinayaan xaqooda aaya-ka-tashi oo heel iyo hooba u fidiyaan.
Waxay canbaarayn u soo jeediyeen dadweynihii shirka ka soo qaybgalay shir ku-sheegii ka dhacay Jigjiga ee dadka sharafta leh lagu bahdilayay kaasoo ahaa wax ay dadka damiirka leh ay layaaban. Sidoo kale waxay dhalinyarada OYSU-Sanca uga digeen inay ka foojignaadaan meel kastoo ay joogaanba bulshada Somalida Ogadenia shirqoolada uu wado gumaysiga.
Shirkan oo kusoo gaba gaboobay farxad iyo rayn rayn ayaa waxaa lagu balamay in la dardar galiyo taageerada halganka.